Shuruudaha adeegsiga – AwKutub News
Markasta oo aad soo booqato boogga AwKutub News ee ah awkutub.net, waxaad raalli ka noqotay shuruudaha adeegsiga bogga AwKutub News, kuwaas oo kala ah.
1. AwKutub News waxey xaq u leedahay, iney xayeysiin kugu tusi karto, meelkastoo ka mida boggeena awkutub.net.
2. Wararka, qoraalada, sawirrada iyo muqaallada kusoo baxa awkutub.net, waxey u dhowrsan yihiin bogga AwKutub News, lamana isticmaali karo, ogolaansho iyo xigasho la’aan.
3. Dhammaad warkasta, faallo kasta iyo qoraal kasta, Bogga AwKutub News wuxuu kuu ogolaanaya inaad aragtidaada dhiibato, oo aad faallo ka bixin karto wixii aad aqrisay, faalladaas uguma gafi kartid, shaqsi, shirkad, koox iyo cid gaara toona.
4. Waxaa dhici karta in awkutub.net, lagu daabaco, maqaallo iyo faalloyin ay qoreen shaqsiyaad AwKutub News ka tirsan ama bannaanka ka ah, taas oo ay ku caddeeyeen aragtidooda gaarka ah ee ay arrin ka qabaan, aragtidaas marna ka turjumimeyso aragtida AwKutub News, ee waxa ay ku kooban tahay shaqsiga ku saxiixan qoraalkaas, isla qoraalladdaas haddey markii ugu horreysay kusoo bexeen awkutub.net, lama qaadan karo, lagumana daabici karo bog kale haddii qoraagu AwKutub News siiyey.